Ayaamihii aan araga waayey: Waxa Qoray Cumar Seerbiya. |
Ayaamihii aan araga waayey: Waxa Qoray Cumar Seerbiya.
Hargeisa(GNN):-1997kii waxay ahayd sannadkii ugu dambeeyey ee aan nolol baadiye ku qaato bilihiisii hore ee aan wali ku sii noolaa waxa uu xanuun iga haleelay indhaha kaasi oo sababay in aan habeenkii haba yaraatee waxba arki waayo ilaa aan helo Iftiin sida Toosh ama nalalka korontada aniga oo wali dareemaya inay xaaladayda arag is bedeshay.si caafimaadkayga loo badbaadiyo Aabahay Cali Xasan Geelle waxa uu go’aamiyey in dhakhtar ahaan Hargeysa lay keeno.
galab ka mid ah maalmahaygii Hargeysa waxaan aabo ka codsaday madaama ay qoraxdu soo jeedo isla markaana aan magaaladii xoogaa kala bartay inuu ii ogolaado inaan soo salaamo xafad ehelka ah oo meel aan
suuqa ka fogayn degan.
allaw aabahay u naxariiso adiga ayaa abaal waalid gudi karaa
Axad 21 Febraayo 2016 ayaan ku aasnay xabaalaha Naasa-hablood ee waqooyiga Hargeysa